Roma iyo Lazio oo Bareejo Ku Kala Baxay Kulankii Rome derby iyo Kooxaha Inter,Sampdoria iyo Fiorentina oo Badiyay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxaha Roma iyo Lazio ayaa barbardhac 2-2 ah kulak ala baxay kulankii Roma derby.
Labadan kooxood ayaa waxa ay ku wada ciyaaraan oo ka dhaxeeyso garoonka Stadio Olimpico.
Kooxda Lazio ayaa qeybtii hore ee ciyaarta dhalisay labo gool,waxana u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Stefano Mauri iyo Felipe Anderson,sidasi ayaana lagu nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Kooxda Roma ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta dhalisay labo gool oo barbardhac ah,waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahan Francesco Totti.
Ciyaaryahan Totti ayaa dhaliyay goolkiisii 11-aad ee 40-kulan oo uu la ciyaaray kooxda Lazio kulanka Rome derby.
Kooxda Roma ayaa ku dhibco noqotay kooxda Juventus oo caawo la ciyaareyso kooxda Napoli.
Kooxda Roma ayaa waxa ay leedahay 40-dhibcood,halka kooxda Lazio ay horyaalka uga jirto kaalinta sedaxaad,iyadoo leh 31-dhibcood.
Kooxda Sampdoria ayaa soo gashay kaalinta shanaad ee horyaalka talyaaniga,ka dib markii ay garoonkeeda Luigi Ferraris 1-0 uga badisay kooxda Empoli.
Ciyaaryahan Citadin Martins Eder ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Sampdoria.
Kooxda Sampdoria ayaa kala horeynta horyaalka talyaaniga uga jirto kaalinta shanaad,waxana ay leedahay 30-dhibcood,halka kooxda Empoli ay horyaalka uga jirto kaalinta 15-aad,iyadoo leh 18-dhibcood.
Kooxda Fiorentina ayaa ciyaar todobo gool la iska dhaliyay garoonkeeda Artemio Franchi 4-3 uga badisay kooxda Palermo.
Kooxda Fiorentina ayaa waxaa afarta gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Manuel Pasqual, Jose Maria Basanta, Juan Cuadrado iyo Joaquin.
Kooxda Palermo ayaa labo ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Robin Quaison,halka goolka kale oo rigoore ahaa uu u dhaliyay ciyaaryahan Andrea Belotti.
Kooxda Fiorentina ayaa kala horeynta horyaalka talyaaniga uga jirto kaalinta todobaad,waxana ay leedahay 27-dhibcood,halka kooxda Palermo ay horyaalka uga jirto kaalinta tobanaad,iyadoo leh 25-dhibcood.
Kooxda Inter Milan ayaa garoonkeeda San Siro 3-1 uga badisay kooxda Genoa.
Kooxda Inter Milan ayaa waxaa sedaxda gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Rodrigo Palacio,Mauro Icardi iyo Nemanja Vidic.
Kooxda Inter Milan ayaa kala horeynta horyaalka talyaaniga uga jirto kaalinta sagaalaad,waxana ay leedahay 25-dhibcood,halka kooxda Genoa ay horyaalka uga jirto kaalinta todobaad,iyadoo leh 27-dhibcood.